बलिउड नायिका इशा गुप्तालाई होटल मालिकले के गरे यस्तो! – PathivaraOnline
Home > समाज > बलिउड नायिका इशा गुप्तालाई होटल मालिकले के गरे यस्तो!
admin July 8, 2019 समाज	0
एजेन्सी । बलिउड नायिका ईशा गुप्ताले होटल मालिक रोहित विजले आँफुमाथि यौ’न दुव्र्य’वहार गरेको आरोप लगाएकी छिन् । गएको शुक्रबार उनको नयाँ फिल्म ‘वन डेः जस्टिस डिलीवर्ड’ को रिलीज भएसँगै उनी खुशी साट्न साथीहरुसँग होटलमा गएको समयमा रोहित विजले आँफुमाथि आँखाले बला’त्कार गरेको आरोप लगाएकी छिन् ।
शनिवार ईशाले होटल मालिक रोहित विजले उनीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै ट्विट गर्दै भनेकी छिन्, ‘यदि देशमा म जस्तो महिलाले त असुरक्षित महसुस गरिरहेकी छु भने अरु महिलाहरुको हालत कस्तो होला रु यहाँ सम्म कि मसँग दुईजना सेक्युरिटी गार्ड थिए तर मैले यस्तो महसुस गरे कि उसले आँखाले नै मलाई बला’त्कार गरिरहेको छ ।’ ‘रोहिज विज जस्ता मानिसहरुका कारण नै महिलाहरु आफूलाई कहिल्यै सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैनन् । ईशा गुप्ताको यो आरोपले अहिले बलिउड मज्जैसँग तातेको छ ।